Asa tana maro-Ministeran’ny Mponina : Olona 300 isa nahazo tombontsoa teny Anosizato Andrefana -
AccueilSosialyAsa tana maro-Ministeran’ny Mponina : Olona 300 isa nahazo tombontsoa teny Anosizato Andrefana
Asa tana maro-Ministeran’ny Mponina : Olona 300 isa nahazo tombontsoa teny Anosizato Andrefana
09/05/2017 admintriatra Sosialy 0
Ao anatin’ny fanampiana ireo mponina sahirana hatrany, nitohy omaly indray ny asa sosialin’ny ministeran’ny Mponina, Fiahiana ara-tsosialy ary Fampiroboroboana ny vehivavy (MPPSPF) eny anivon’ny Distrikan’Antananarivo Atsimondrano. Taorian’Ankaraobato, olona 300 isa avy amin’ny fokontany fito isan’izany Antokontanitsara, Ampefiloha, Ambanimaso, Antananambony, Ambodivona, Antandrokomby ary Ankazotoho no nahazo tombontsoa tamin’ny tetikasa “Argent contre travail” (AGR) teny amin’ny kaominina Anosizato Andrefana, tamin’ny asa fanadiovana lakandrano mirefy 400 m amin’ny halavany ary 6 m ny sakany. Satria isaky ny oram-be dia tsentsina foana ny lakandrano izay mitarika fiakaran’ny rano be. Ary tsentsina be ny lakandrano eny an-toerana taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo roa volana lasa izay. Izay anton’izay no nahatonga ny ministera nanao ny asa tana- maro mba hanesorana ireo fako manentsina ny lakandrano. Marihina fa miasa 5ora isan’andro mandritra ny telo andro amin’ny sarany 5 000 ariary isan’andro ireo mpahazo tombontsoa.
Ankoatra ity asa ity izay tafiditra ao anatin’ny fanarenana fiainana aorian’ny rivodoza izay ao anatin’ny traikefan’ny MPPSPF dia fitaovana entin’ny ministera ihany koa mba hahafahan’ireo fianakaviana marefo hanana fidiram-bola fanampiny, indrindra manoloana ny fiakaran’ny vidin’entana izay ilaina amin’ny fiainana andavan’andro. Ao anatin’ny fanohanana ireo vehivavy ho fanomezana hery azy ireo amin’ny fizakantena ara-toekarena, nisy ny fitaovana miteraka fidiram-bola natolotry ny minisitra Onitiana Realy tamin’ireo fikambanam-behivavy teny Anosizato Andrefana. Noho izany, vehivavy mpikambana miisa 230 no nahazo masinina fanjairana sy ravin-damba mirefy 50m . Tsy nanadino ireo be antitra teny amin’ity distrika ity ihany koa ny ministera, ka nisy ny fizarana vary 5kg, siramamy 1kg ary savony ho azy ireo.
Ny faha 28 ny volana janoary no niroso tamin’ ny atrik’asa ireo filoham-pirenena izay mandrafitra ny fivoriamben’ ny vondrona afrikanina tanterahina atsy addis abeba mikasika ny ady amin’ ny kolikoly. “ ny fandresena amin’ ny ...Tohiny